Nri azu | Azu
Nri azụ dị ezigbo mkpa, ebe ọ bụrụ na anyị akpacharaghị anya, anyị nwere ike ịkpata ọnwụ nke ụmụ anụmanụ n'ihi oke nri. Anyi aghaghi iburu n’uche na umu anumanu a nwere agwa iri nri oge obula emere ha nri. ya mere ha enweghị mgbochi n’iri nri, ya mere anyị nwere ike igbu ya.
N'ime oghere a You ga-ahụ ihe niile ịchọrọ ịma gbasara nkọwa dị ka usoro oge anyị nwere ike itinye n'ọrụ mgbe anyị na-enye ha nri, mgbe anyị na-emechi ọkụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị oke mkpa maka ịdị adị ya. Na mgbakwunye n'ụdị nri ma ọ bụ ndụmọdụ ndị ọzọ anyị ga-eburu n'uche.
Azụ ha na-eri nri na mmekọrita na ụdị mbido, ma ọ bụrụ na ha bụ ebe okpomọkụ, ọ bụrụ na ha bụ mmiri oyi wdg.
Aquaponics bu sistemụ na - agwakọta njirimara nke azụ azụ site n'ụzọ ọdịnala aquaculture na ...
O nwere ike ịbụ na ị nwere akwarium ma ị maghị ihe ị ga-azụ azụ gị. E nwere ọtụtụ puku ...
Azụ nri na-enye nri
Ọ bụrụ na ị nwere tankị azụ, ị nwere ike ịnọ na-eche maka ịzụrụ ihe nri azụ ma chefuo ya ...
Ogologo oge ole ka azụ ga-aga n’erighị nri
por Carlos Garrido eme 4 afọ .
Ugbu a, enwere ọtụtụ anụ ụlọ anyị nwere ike ịchọta dịka nhọrọ iji bụrụ ndị ndụ na ...
Ahụ ziri ezi nke azụ bụ inwe ezigbo nri. Taa, anyị nwere imerime akụrụngwa iji ...
Azu nri na ezumike
por Encarni eme 10 afọ .
Mgbe anyị na-aga ezumike, dịka ọmụmaatụ ugbu a na akwa mmiri ma ọ bụ ọwa mmiri nke dị na Spain ma na-enye ...
Azu bu anumanu nke na-achoghi nri, ma oburu na i lee akwarium a, mgbe emechara gi aru ...